कर्मकाण्डी पोको बोक्ने बाहुन हास्यव्यङ्यका महारथी: वासुदेव लुइटेल | literature कर्मकाण्डी पोको बोक्ने बाहुन हास्यव्यङ्यका महारथी: वासुदेव लुइटेल | literature
We have 1332 guests and 223 members online
Content View Hits : 35808646
Exclusive:2photos: काठमाडौं- वासुदेव लुइटेल पुराण भन्ने, न्वारन र श्राद्ध गर्ने, नाग टास्ने, कुश बाँड्ने र डोरा बान्ने कर्मकाण्डी बाहुन थिए । सिधा उठाउन उनी ढुङ्गाअड्गाबाट हिँडेर जोरपाटीसम्म पनि पुग्थे । स्वास्नी, छोराछोरी पाल्नु पर्ने वाध्यता पनि जोडिनाले पुस-माघमा पनि उनी खाली खुट्टा नै हिंड्थे । त्यसै प्रसङ्गमा उनले भने, 'त्यस बखत भनेका बेला म पेटभरि खान पनि पाउँदिन थिएँ ।'
लुइटेल नेपाली भाषासाहित्यमा हास्यव्यङ्ग्यकारकारूपमा सुपरिचित थिए । भूतका भिनाजुलगायत सत्तरी थरी उपनाउँमा उनले जीवनभरि लेखिरहे । उनले १९९७ सालमा 'शारदा' मार्फत आफ्नो लेखनयात्राको आरम्भ गरे । उनको पहिलो किताब 'भूत छैन' २००६ सालमा प्रकाशित भयो । अनि उनका जम्मा १० वटा कृति प्रकाशनमा आए । उनले केही पत्रिकाको पनि सम्पादन गरे । उनले संस्कृतको वैराग्यशतक र नीतिशतकलाई नेपालीभाषामा रूपान्तर गरे । साथै उनले शान्ता श्रेष्ठदेखि श्यामप्रसाद शर्मासम्मका कृति पनि प्रकाशनमा ल्याइदिए । त्यति मात्र होइन उनले भीमनिधि तिवारीदेखि भैरव अर्यालसम्मलाई शिखरमा पुर्याउन तपस्या पनि गरे ।
Prominent Nepalese satirical author late Basudev Luitel. Photos courtesy: Nai Prakashan
लुइटेल नेपाली भाषासाहित्यका ओजस्वी साधक थिए । त्यसैले उनको सम्मानमा पनि एक दर्जन किताब लेखिए । साथै उनका नाउँमा सयौँ लेखरचना निर्माण भए । उनका छोरा डा. विद्यादेव शर्मा तथा बुहारी डा. नन्दिता शर्माकोसमेत सहयोगमा 'वासुदेव लुइटेल' नामक एउटा स्तरीय स्‍मृतिग्रन्थको पनि प्रकाशन भयो ।
झङ्कनाथ शर्मा र चन्द्रप्रभा लुइटेलका एउटै छोरा वासुदेवको जन्म १९७४ साल भदौ २३ गते काठमाडौँको नैकापमा भएको थियो । लुइटेलले तीनधारा पाकशालामा पढे । यिनले घोकेर नै वेदका चालीस अध्याय पानी पारेका थिए । त्यसै विद्याले उनले नेपालीभाषा प्रकाशिनी समितिमा पण्डितको जागिर खाए । त्यहाँ यी बालकृष्ण समका सहायक थिए । त्यहाँ पाँच वर्षकाम गरेर २००४ सालमा उनी गोरखापत्र छापाखानाको पण्डितमा भर्ना भए । त्यसैताक उनी जुद्धोदय हाइस्कुलमा पनि पढाउँथे । सँगसँगै उनले कान्तिईश्वरी राज्यलक्ष्मी हाइस्कुलमा पनि पढाए । निरन्तर दुइ दशकसम्म दुवै स्कुलमा पढाएर उनले कुशल शिक्षकको सम्मान पनि पाए । त्यसै माझ उनले नक्साल रात्रि पाठशाला हाइस्कुलमा पनि ६ वर्ष पढाए । यी साइकलमा बिहान, दिउँसो र रातिका स्कुलहरुमा धाउँथे । पछि उनी स्कुटर चढ्ने हैसियतमा पनि पुगेका थिए ।
लुइटेलले १८ वर्ष उमेरमा ललितपुर धापाखेलका जीवननाथ पोख्रेलकी जेठी छोरी जानकीदेवीसँग बिहे गरे । जानकीबाट धन र कमला जन्मे । अनि उनले फेरि पढेकी केटी खोजे । बालकृष्ण समको सहयोगमा यिनले जावलाखेलका सोमनाथ पौडेलकी कान्छी छोरी शान्तिसँग पुनः बिहे गरे । कान्छी ल्याएपछि उनले आफ्नी जेठी बूढी जानकीदेवीलाई रानी जगदम्बाका चाकरमा पुर्याए ।
लुइटेलकी कान्छी श्रीमतीबाट विद्यादेव, प्रतिभा र उषा जन्मे । अनि बूढेसकाल भएपछि यिनले जेठी पत्नी पनि आफ्नै घरमा ल्याए र दुवै पत्नीलाई एकै ठाउँमा राखे । लुइटेलभन्दा दस वर्षपहिला झन्नै एक वर्षको अन्तरमा यिनका दुवै पत्नी स्वर्गीय भए ।
लुइटेल मान्छेसँग इत्रिएर, जिस्किएर र लाडे पारामा पनि बोल्थे । त्यसैले उनलाई नबुझ्ने उनीसँग टाडै बस्थे । उनीसँग एक चोटि भेटेका मान्छे कि उनका प्रिय हुन्थे या उनको नाउँ सुन्न मान्दैन थिए । एक पटक मदन पुरस्कार गुठीमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दका जेठा छोरा जयन्त चन्द पुगे । लुइटेलले जयन्तलाई 'ए गोठालाका छोरा कताबाट आइस्?' भन्दा जयन्त फनफनी घुमेर त्यहाँबाट हिंडेका थिए । वास्तवमा पहिलो पटक भेटेका मान्छेलाई उनी एउटा नाउँ नराखी कुराको आरम्भ नै गर्दैन थिए । साथै लुइटेलको सबैभन्दा ठूलो सोख साहित्यकारको फोटो खिच्ने मानिन्थ्यो । उनले साहित्यकारहरूको प्रायः टेप गरेर पनि राख्थे ।
नेपाली हास्यव्यङ्यका महारथी वासुदेव लुइटेलको २०६३ साल भदौ २५ गते काठमाडौंमा स्वर्गीय भयो । त्यसबेला उनी ९० वर्षमा हिंड्दै थिए ।